Thomas Lemar oo sirasmi ah ugu biirey kooxda Atletico Madrid | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Thomas Lemar oo sirasmi ah ugu biirey kooxda Atletico Madrid
(13-6-2018) Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa ku dhowaaqday inay heshiis hordhac ah la gashay kooxda Faransiiska ah ee Monaco, kaas oo ah inay la kala wareegaan xiddiga xulka qaranka Faransiiska ee Thomas Lemar.
Atletico ayaa ku guuleysatay inay heshiis is afgarad ah la gaadho ciyaartoygan orodka badan, kaas oo saxeexiisa ay ku tartamayeen kooxaha Arsenal oo muddo dheer daba socotay iyo Liverpool oo marar badan lala xidhiidhiyey.
Thomas Lemar ayaa la sheegay inuu u xidhan doono Atletico Madrid lambarka 10, kaas oo dhowaan la wariyey in loo diiday ciyaaryahannada kale, kaddib markii uu siibay xiddigii xidhnaan jiray.
War kooban oo Atletico Madrid ay kasoo saartay heshiiska Lemar ayaa waxay ku tidhi: “Atletico de Madrid iyo Monaco waxay gaadheen heshiis hordhac ah oo ku saabsan la kala wareeggidda Thomas Lemar. Maalmaha soo socda, labada kooxood waxay ka wada shaqayn doonaan inay heshiis dhamaystiran gaadhaan.”